Rasolo André: “Hamadika ny velirano ho asa ifarimbonana ny filoha” | NewsMada
Rasolo André: “Hamadika ny velirano ho asa ifarimbonana ny filoha”
Milamina izao ny fandraisana ny voka-pifidianana ofisialy. Hanao ahoana ny ho tohin’ny raharaham-pirenena? Maneho ny fijeriny ny mpampianatra sosiolojia politika eny amin’ny oniversite, Rasolo André: “Hamadika ny velirano ho asa ifarimbonana ny filoha vaovao.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ny fahitana ny fanambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny voka-pifidianana ofisialy farany teo?
Rasolo André (-): Vanim-potoana lehibe eo amin’ny tantaram-pirenena ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Mifampiarahaba isika ankehitriny fa vita soa aman-tsara ihany izy iny. Mankasitraka ireo andrimpanjakana: ny HCC, ny Ceni, ny governemanta. Eo ihany koa ireo fikambanan’ny firaisamonina sivily, ny vondrona iraisam-pirenena ary ny olom-pirenena malagasy. Samy nandray andraikitra…
Nambaran’ny HCC tamin’ny 8 janoary 2019 fa voafidy ho filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara mandritra ny dimy taona Rajoelina Andry Nirina. Miarahaba ny filohan’ny Repoblika fahafito,voafidy tamin’ny alalan’ny fifidianana nandraisan’ny vahoaka malagasy anjara. Pejy vaovao no misokatra eo amin’ny fiainam-pirenena.
* Fahitanao ny fahatongavan’ireo kandidà mpifaninana niatrika ny fanambarana ny voka-pifidianana ofisialy teny amin’ny HCC?
– Heveriko fa misy dikany lehibe iny fahatongavan-dRavalomanana Marc sy Rajoelina Andry teny amin’ny HCC iny. Midika ny fahatongavan’izy ireo teny fa ekeny izay didy hambaran’ny HCC eo. Vita ny lalao, mifandray tanana ny mpifaninana. Nibaribary izany raha tonga nandray tanana ny filoha vaovao ny Repoblika ny kandidà lah. 25, araka ny soatoavina repoblikanina.
Nisy ireo fitakiana nentina teny an-dalambe. Antenaina anefa fa taorian’iny 8 janoary iny, hihaino sy hanara-dia ny kandidà notohanany, indrindra ireo tonga taty aoriana naneho ny fanohanany an-dRavalomanana Marc. Marihiko fa na Ravalomanana Marc na i Serge Zafimahova nitantana ny fampielezan-keviny, samy nitsodrano ny filoha vaovao ny Repoblika. Fihetsika mahate hidera izany, irosoana amin’ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika sy manaja ny hasin’ny fiandrianam-pirenena. Ny kandidà resy aloha no mankatoa ny fandresen’ny mpifaninana aminy, izay vao manaraka ny fiarahaban’ny fianakaviambe iraisam-pirenena.
* Tsy efa leo korontana sy manantena filaminana amin’izay koa ve ny vahoaka malagasy?
– Marina izany. Eny e, aleo tsy hasarotina ny raharaha efa sarotra. Mila mifampihaino sy mifanaja isika, indrindra ireo tomponandraikitra politika. Mila alamina ny tontolo politika misavoritaka eto amin’ny firenena. Nanaja ny kandidà nifaninana taminy ny filoha vaovao ny Repoblika. Nankasitraka ampahibemaso ny fiarahaban’ny kandidà Ravalomanana Marc azy izy. Enga anie izany fihetsik’izy mirahalahy mianaka izany mba halaintsika rehetra tahaka manomboka izao: ho mpirahalahy mianala. Ho tongotra havia sy havanana, miara-mamindra. Hifanome tanana hanarina ny sosialim-bahoaka, ny fandriampahalemana, ny fampivoarana toekarena fa indrindra, ny fanorenana ny fanjakana repoblikanina ho marin-toerana tsara. Fanjakana repoblikanina izay vao enimpolo taona latsaka kely no niorenany eto amintsika.
* Hanomboka taona vaovao isika, miaraka amin’ny filohan’ny Repoblika vaovao. Ny teninao farany?
– Toko tapaka, vilany mitongilana, izay tsy nety arenina. Mino aho fa ho raiamandreny misokatra amin’ny Malagasy rehetra ny filoha vaovao ny Repoblika: na amin’ireo nifidy azy, na amin’ireo manohitra azy, na amin’ireo maro anisa tsy tonga nifidy. Hamadika ny velirano ho asa ifarimbonana izy. Hanandratra avo ny lazan’i Madagasikara, eo ambany fitarihan’ny filohan’ny Repoblika tanora indrindra aty Afrika. Hotahin’Andriamanitra anie izy, ary harovan’Andriamanitra lalandava i Madagasikara.